Ukulawulwa kwesifo sikashukela > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Ungasithola kanjani isisindo sikashukela futhi ube ngcono ngokudla okukhethekile?
Izizathu ezinkulu zokuthi abantu abanesifo sikashukela behlise isisindo Kungani ezinye iziguli ezinesifo sikashukela zehla kakhulu, kanti ezinye, ngakolunye uhlangothi, zisheshe zithole isisindo futhi zibe nenkinga yokukhuluphala? Konke kukhulunywa ngama-pathogenesis ezinhlobo ezahlukahlukene zesifo. ...
Imithetho eyisisekelo Yezikhumba Ukunakekelwa
Kungani i-glucometer idingeka? I-glucometer ibaluleke kakhulu ezigulini ezihlinzayo, ngoba, ngokwazi i-glycemia ngaphambi kokudla, kulula ukubala umthamo we-insulin emfushane noma we-ultrashort, olawula ushukela wasekuseni nantambama ukukhetha umthamo ofanele we-basal hormone. ...
Isimo soshukela wegazi kwabesifazane - ithebula lamagugu ngeminyaka nokukhulelwa, izimbangela zokuphambuka
Ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical: okwejwayelekile, okubhaliwe kwemiphumela, itafula
Ukuhlaziywa kwegazi le-biochemical Ukuhlaziywa kwe-biochemical kwegazi kuyindlela yokuxilonga elebhu evumela ukuthi wena uhlaziye umsebenzi wezitho zangaphakathi (isibindi, izinso, amanyikwe, isigaxa senyongo, njll. ...
Umchamo wesifo sikashukela
Ukuhlolwa kwesifo sikashukela Esikhathini sokukhula okuqhubekayo kweziguli ezinesifo "esoshukela", abantu abaningi bayathanda ukwazi ukuthi yiziphi izivivinyo zesifo sikashukela ezinganikeza umphumela onembile we-100%. Masinyane kufanelekile ukusho ukuthi kukhona abaningana. ...
I-Bionime glucometer: imiyalo esetshenziswa ngohlelo lokulawula ushukela
Ama-gluioneter we-Bionime: Ukuqhathanisa incazelo Ungathola kanjani ukuthi ukwelashwa kuyasebenza noma, kunalokho, kudinga ukulungiswa? Umuntu akakwazi ukuthembela enhlalakahleni yakhe esimweni esinjalo. ...